LucidPix na-ejikọ otu Nde ndị ọrụ
LucidPix, ngwa 3D edezi foto ọhụrụ a dị na June 2020, na-ewetara foto ndụ n'ụzọ ọhụụ, na-ejikọta ọtụtụ teknụzụ dịka ụlọ ọrụ ọ bụla ọzọ na-emebeghị. Ngwa ahụ na-ewepụta ngwa ahịa na Hunt, weebụsaịtị nke na-adabere na ntinye aka nke ndị ọrụ iji gosipụta ngwaahịa ọhụrụ. Egosiri ngwa ngwa ngagharị iwe dị ka ntọhapụ beta na CES 2020 ma mee ka ndị na-ese foto na ndị ọrụ aka dị ka imepụta ma kesaa ihe ngosi 3D site na iji bọtịnụ. Ọ dị maka nbudata na gam akporo na iPhone.
“Ihe karịrị otu nde beta na-anwale enyemaka nyeere anyị aka idozigharị LucidPix ịbụ ezigbo ngwa na-eji ọgụgụ isi,” kwuru na CEO na ngalaba nchoputa Han Jin kwuru. "Ndị ọrụ anyị enyela anyị nghọta na nzaghachi iji hụ na anyị na-egbo mkpa nke ndị ahịa ọ bụla ebe anyị na-enye mgbanwe mgbanwe."
Ngwa LucidPix, dakọtara na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ smartphone niile eji eme ihe taa, na-eme ka foto dị na akụkụ atọ nwere omimi dị omimi, ma na-enyere ndị ọrụ aka ịkekọrịta ihe okike ha na saịtị mgbasa ozi ọ bụla ma ọ bụ n'ime obodo LucidPix chiri anya site na iji bọtịnụ dị mfe.
Emebere arụmọrụ kemgbe mwepụta beta gụnyere ihe omimi omimi AI na-akwalite, ikike na-edezi foto dị elu na ọdịnaya nwere ọtụtụ dị ka ederede, akwụkwọ mmado, okpokolo agba 3D na nzacha, emechaala na enweghị mkpa oghere ma ọ bụ ihe mmetụta pụrụ iche. Ndị okike nwere ike iji ngwa ahụ iji tọghata foto ndị gara aga, na-enye ohere ka ncheta dị oke ọnụ gafee na ihuenyo. Ngwa ahụ nwekwara ike ijide ihe osise mbụ na akụkụ atọ. Nkwalite ndị a na-aga n'ihu na-edobe LucidPix iche na onyinye 3D kachasị nke Facebook, ma na-enye ndị ọrụ ohere ịmepụta ọdịnaya 3D ngwa ngwa na mfe maka mgbasa ozi ọ bụla, gụnyere Instagram, TikTok na SnapChat. LucidPix na-enye ndị ọrụ ohere idezi ma kwalite foto 3D ha, na-enyekwu mgbanwe na ihe ha na-eke na nọmba.
LucidPix nwere ikike enyere maka inyere onye okike ọ bụla aka - site na ndị na-ese ihe na-enweghị ihe ọ bụla ruo ndị ọrụ azụmaahịa ọkachamara - n'usoro ha na mmepụta nke onyonyo, nke ihe echefu echefu. Ngwa ahụ ga-aga n'ihu na-emekwuwanye ma na-eto na ikike ya n'oge oge, gụnyere nyocha na njiri mara omimi, iji mepụta ihe osise 3D kacha mma dị ebe ọ bụla. Uche a wuru n’ime LucidPix ga-emetụta ụdị ọdịnaya dị n’ihu site na AR, VR, 3D na hologram gafere n’elu ikpo okwu maka isi, ngosi na mkpanaka.
"LucidPix na-enye gị ohere ịdị ka ị na - eso ndị ezinụlọ na ndị enyi gị na - ekerịta ahụmịhe onwe gị nke onwe gị, ma ọ bụ na-agagharị ma na-agagharị ụwa," Nkà na ụzụ anyị na-akwado ndị ọrụ ka ha na-eji ihe okike enweghị atụ na-eme ihe.
LucidPix dị maka nbudata maka gam akporo na Google Play Store na maka iPhone na Apple App Store na-akwụghị ụgwọ. Ngwa ahụ na-enye ndezi 3D foto na-akparaghị ókè, ohere LucidPix dịpụrụ adịpụ, yana ịkekọrịta ọtụtụ mgbasa ozi na nyiwe ozi, yana nkwalite ngwa-ngwa na-emeghe ọtụtụ nhọrọ mbupụ dị elu.
Ntuziaka Mbido LucidPix →← Ngwa ese foto 3D mepụtara njikọ n’oge iche